Sumcad Dilka Terra iyo Su’allaha Ku Gaddaaman!/Qore: Cumar Yusuf - Ceelhuur Online
Home > Qalinka Qoraaga > Sumcad Dilka Terra iyo Su’allaha Ku Gaddaaman!/Qore: Cumar Yusuf
Sumcad Dilka Terra iyo Su’allaha Ku Gaddaaman!/Qore: Cumar Yusuf
February 2, 2019 February 2, 2019 Cali Yare1154
“Musuqmaasuq soomaali waa meheradeediiye”- Sayidka .
Barnaamijka Baadigoob, waa barnaamij uu soo jeediyo wariye lagu magacaabo Abdirisaq Terra, sida uu sheegay wuxuu diiradda ku saaraa dhacdooyin qarsoon oo u baahan in daaha laga rogo si shacabka xaqiiqda u ogaadan.
Waxaan daawaday qeybtiisa u danbeysay, wuxuu diiradda ku saarayaa musuq-maasuqa ka jira Muqdisho, waa hubaal in Muqdisho tahay hooyada Musuq-maasuqa Soomaaliya oo uu ka jiro musuq-maasuq aad u baahsan, kaasoo mudan in laga dhiidhiyo, laga banaan-baxo, waayo waxa hantidooda la dhacayo waa shacabka dulman ee Muqdisho.
Judhiiba wariyaha, wuxu isku dayayaa inuu ka sheekeeyo taariikhda musuq-maasuqa hareeyay dowladnimada Soomaaliya 1960 ilaa hadda, balse wax tusaalle kama bixinayo ilaa laga soo gaaro 2012. Tanni waxay noqon kartaa aqoondarro taariikhda siyaasadda Soomaaliya ee wariyaha haysata ama inuu usoo dag dagayey u jeedkiisa oo ah 2012ka, waqtigaa oo Madaxweyne Xasan sheikh loo doortay madaxweynennimada Soomaaliya.
Halkan waxan kuso gudbin doonaa dhowr su’aal oo jawaabo u baahan.
Barnaamij hal dhinac ka raran:
Barnaamijka Baadigoob 3, waa barnaamij ka raran hal dhinac, waxaa kaliya lagu bartilmaameysaday xubno dowladda mucaarad ku ah, ma ahan barnaamij dheellitiran, cida ugu badan ee lagu waraystay waa xildhibaanno ama siyaasiyiin ay is hayeen kooxda madaxweyne Xasan sheikh waxaana kamid ah kaligii wadani- Sakariye xaaji cabdi, Abdulkadir Araleh iyo rag kale. Tusaalle ahan ninka lagu sheegay Abdulkadir Araleh oo ay ku sheegeen falanqeeye siyaasaddeed waa nin ka arradan siyaasad oo aan waxba kala soconin heshiisyada caalamiga ee dowladdaha la galaan dowladdo ama ururo kale, tusalle ahaan dadiiqada 24naad wuxu dafirayaa sharcinimada madaxweynennimadii Xasan sheekh oo wuxu leeyahay “ Halkan waxaa joogi jiray nin madaxweyne sheegan jiray, haddaad maqasheen magaciisa ma garanayo” ereyadani waxay gef cad ku tahay sharciyada iyo dastuurka wadanka, waana ereyo ay caan ku yihiin Farmaajo iyo Kheyre oo aaminsan in burburkii kadib dowlad iyo madax aan iyaga ahayn wadanku soo marin!
Ma diidani in musuq-maasuq baahsan uu jiray waqtigii Xasan sheikh haddane uu jiro mid lamid ah balse Musuqii dhacay berri horre iyo kan hadda taagan yaa muhiimsan in xog laga raadiyo si loo joojiyo, maxaa kalifay in barnaamijka kaliya ku koobnaado 4 nin oo qaraabo la ah xasan shiikh? Sow ma ahan sumcad dil loo maleegayo madaxweyne Xasan Sheikh
Wariyaha wuxu sheegay in ku dhowaad lix bilood waday baaritaanka warbixinta. Sido kale, wuxu sheegay in Faarax Cabdulqaadir iyo Cabdikarim guuleed ay Muqdisho ka maqanyihiin sidaa awgeed aysan u suurtogellin waydiinta eedda musuq-maasuq ee uu soo jeediyay. Ogaalkay Faarax Cabdulkadir, Muqdisho kama maqnaanin labo bil oo isku xigta!
Daqiiqada 30naad ee barnaamijka Baadigoob wuxu is dultaagayaa oo si mutaxan inoo barayaa shirkad wariyaha uu ku sheegay RA international oo ay leedahay haweenay carab ah, halkan waxaa ku jiro is-diidooyin badan oo abuuraya shaki, wariyaha wuxu sheegayaa in musuqii uu ku raadjoogay uu la galay xarunta xalane, asiga oo dhuumalaysi ahna galay xarunta Xalane!
Halkan dhowr su’aal oo jawaab u baahan ayaa ku jiro:
1-Wariye Terra wuxuu soo bandhigay warqad uu ku sheegay inay sir tahay oo shirkadda RA international ay heshiis kula saxiixatay shakhsiyaad ka tirsanaa dowladdii Xasan sheekh, warqada sirta ee uu soo badnhigayo waxa ku qoran in heshiiska shirkadda lala saxiixday 2017-da, waa is-diido aan si naba isu waafaqaynin in waqtiga la saxiixay heshiiska shakhsiyaadkaasi xil ma haynin.
2- Wariyaha maadama uu ku raadjoogay musuq-maasuqa dowladda, fursad dhuumaaleysina uu ku helay gellida Xalane, maxa RA International kaliya ku koobay, sida aan ogsoonnahay xaruntaas waxa ku yaallo ganacsiyo aad u balaaran oo ay wada leeyihiin siyaasiyiin hadda xukunka haya, hoggaamiye kooxeedyo Muqdisho kaso taliyay iyo qaar kale?
Wariyaha soo tebinaya barnaamijka marna masoo hadal qaadin shirkadda loo xiray sahminta shidaalka Soomaaliya ku jiro ee Som oil and Gas oo ah shirkadda ugu weyn musuq-maasuq oo si xaaraan ah ku qaadatay sahminta shidaalka Soomaaliya, musuq-maasuqa iyo sharci-darrada shirkadan waxay gaartay maxkamadaha iyo caddaallada UK, milkiilayaasha iyo maamulayaasha shirkadan waxaa kamid ahaan jiray Xasan Cali Kheyre oo maalin un kadib markii loo magacaabay RW la sheegay inuu iska casilay. Ilaa hadda lama ogo heshiis lala galay, cid la gashay iyo cid ansixisay intaba. Wariyaha waydiiya sababta uusan uso bandhigin, maadama heshiiskeeda la galay waqtigii Xasan sheekh.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Sh.hoose oo loo jeediyay eedeymo culus
Shabaab oo gobolka Sh.Hoose ku xiray tiro dhalinyaro ah
Akhriso: Ajendaha Shirka Beri ee London
Masuuliyiin katirsan Hirshabeele oo doon kula rogmatay xaafadaha fatahaaduhu saameeyeen ee Beledwayne